Izindaba - Kungasetshenziswa ngaziphi izindlela imishini yokusika ye-CNC laser namuhla?
Ukuzisika kwe-Laser ukufaka esikhundleni sommese wendabuko ngomuthi ongabonakali. Inezici zokunemba okuphezulu, isivinini sokusika okusheshayo, kungagcini emaphethini wokusika, ukusethwa okuzenzakalelayo, izinto zokonga, ukusika okushelelayo, nezindleko zokucubungula eziphansi. Izothuthukiswa kancane kancane noma ishintshwe. Imishini yokucubungula insimbi yendabuko.
Iyini injongo yomshini wokusika we-laser? Inhloso yomshini wokusika we-laser awudluli: ukusika, ukuphuma, ukusika ihluzo, ngamagama alula, ukusika.
Izinzuzo ze Umshini wokusika we-fiber laser we-Guohong:
1. ngokunemba High futhi uqhekeko ewumngcingo;
2. Isivinini esisheshayo, indawo yokusika ebushelelezi;
3. Ithonya elincane lokushisa, akukho ukuguqulwa kwemishini yezingxenye ezincane;
4. Ukucubungula akugcini kwimidwebo;
5. Inezinhlobonhlobo zezicelo futhi ingaphatha izinto ezahlukahlukene njalonjalo.
Iziphi izinto ezinganqunywa:
Ukucubungula insimbi engagqwali, i-carbon steel, ithusi, i-alloy steel, i-silicon steel, i-spring steel, i-aluminium, i-aluminium alloy, ishidi lashukumisa, ishidi le-zinc lashukumisa, ishidi le-pickling, igolide, isiliva, i-Qin namanye amashidi wensimbi nokufakwa kwepayipi.
Izinkambu zohlelo lokusebenza lomshini wokusika we-laser: ukucutshungulwa kwensimbi, ukukhiqizwa kwezimpawu zokukhangisa, ibhokisi likagesi nokukhiqizwa kwekhabethe likagesi, umkhakha wobunjiniyela, izinto zikagesi, izingxenye ezahlukahlukene zemishini, izitsha zasekhishini, izimpahla zasendlini, izimoto, imishini yezolimo, imishini yezokwelapha, imikhumbi, i-Aerospace , Ukukhanyisa, imboni yokuvikelwa kwemvelo, i-wire mesh, imboni yehhovisi, imishini yokuqina, ukucutshungulwa kwensimbi nezinye izimboni. Ibanga lesicelo libanzi kakhulu, futhi kungukukhetha kwezimboni zokukhiqiza nokucubungula.